Green fanala lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Green fanala lalao
dia hahazo ny mahagaga dia mety ho samy hafa ny hery, ka nahoana no tsy toy izany, toy ny mahery fo ny lalao an-tserasera Green fanala. Dia tokony manomboka milalao maimaim-poana teti-dratsin'ny tsanganana ity, ianao koa hahatsapa ny hery mba ho tsy mampino. Green fanala lasa endri-tsoratra isan-karazany, ary izany tokoa ekipa hahita fitoerana ho anareo Aho. Voalohany, tonga miaraka amin'ny palitao mety, manangona izany amin'ny an-tsipiriany ny isan-karazany, dia manadio ny endriky ny singa ilaina, raha ilaina, manangona piozila, ka ankehitriny tonga ny fotoana mba manao ady fahaiza-manao. Arovy ny planeta avy amin'ny vahiny sy handringana fahavalon'ny eto an-tany.
Lalao Green fanala tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Green fanala lalao
Baotin'i Camp Green fanala
Dress Green fanala
Tadiavo isa Green fanala
Green fanala Ring Hery
Green fanala Puzzle
Green fanala - jereo eo amin'ny bisikileta
Green fanala: Tadiavo ny abidy
Ry olo-maherin'ny ny lalao Green fanala tonga avy lavitra Vondron-kintana, afaka mba hilaza aminao ny tantaran'izy ireo tanaty aterineto
Lalao Online Rehetra Green fanala lalao
Tantara « Green fanala Corps »
Green fanala – dia tsy ho faran'izay mahery fo, fa ny ekipa iray manontolo nivory ho any amin'ny sendika « Green fanala Corps ». Izy ireo dia natao mba hiarovana ny izao rehetra izao ny DC rehetra izao, ary ny faladiany no misy eto an-tany Oa. Comics momba ny fikambanana niseho tao amin'ny forties ny taonjato farany, ary ny daty ny trano fonenana efa telo tapitrisa taona. Fa toy izany ela no voamariky ny ny fandaminana indray ny composition, misy ady anatiny sy ivelany, izay mandresy soa aman-tsara. Ary raha misy 7.200 mpandray anjara, izay milaza ny tenany ho Green fanala, izay nozaraina ao amin'ny sehatry 3600. Mpandray anjara tsirairay dia manana peratra ny hery, nasain'i avy ny mazava sy manome ny mitafy azy ny manam-petra fahafaha izay voafetra ihany ny saina.
Ny tantara voalaza ao amin'ny Sariitatra, indraindray mihamaro foana ny amin'ny laza mba mihamanjavona indray. Tsy azo fepetra zaraina ho volamena sy volafotsy sy Bronze Age, miaraka amin'ny hafa taona. Isaky ny vanim-potoana, dia niseho mahery fo izay lasa malaza vaovao Green fanala. Fanala eo am-pelatanan'ny tanora injeniera, Alan Scott tamin'ny 1940, izay ihany no tafita velona ao amin'ny lalamby loza. Green lelafo nomena azy ny Ring Hery, sy niaraka tamin'ny manam-petra azo atao. Nanomboka tamin'io fotoana io, Scott lasa mpiady manohitra ny tsy rariny sy ny heloka bevava, ho faran'izay mahery fo sy iray izay nanorina ny Fitsarana Society of America. Taty aoriana dia nivadika fa tsy izy no voalohany Earthman, izay lasa Green fanala – dia ny mpialoha lalana ny Sinoa Yalan Gora anarana. Ireo zava-nitranga dia volamena sy volafotsy taona an'i Hal Jordana – fitsapana mpanamory avy amin'ny orinasa « Ferris Aircraft ».
Lasa malaza faharoa Green fanala peratra nahazo hery avy Abin Sur – maty Green fanala, nianjera tamin'ny tany. Talohan'ny nahafatesany, dia nalainy ny peratra ny Abin fikarohana ho mendrika ho kandidà amin'ny lahatsorany. Hisolo nisy ny olombelona sy ny herim-po ny fanaovana ny marina kristaly. Fandraisana andraikitra, Hal Jordana, niaraka tamin'ny hafa Green fanilo, John mpitandrina ny raharahany: ao amin'ny taona 2000, dia tonga ny mpamorona ny Amerikana Ligin'ny ny Fitsarana.
Ny ratsy lalao ny anjara
Na dia izany aza, ny anjara voatendry ho ny zava-doza ny Green fanala, mandrahona mameno mavo, mampidi-doza ho an'ny rehetra fanilo. Rehefa ny tanàna niaviany Hal – Coast City rava, dia lasa very saina ka nivadika ho Parallax. Ao amin'io mitarehin ny manao ratsy nandritra ny taona maro ary na dia nandrava ny Central Bater Force planeta Oa. Fa raha ny masoandro mpihinana nanapa-kevitra ny hanimba ny tany, ny tenany Hal mamono zavatra hatao fanatitra noho ny ny famonjena, ary avy eo dia teraka indray ho toy ny fanahy ny fanavotana – Spectrum. Ary farany niverina tany amin'ny fanjakan'i Green fanala, fa ny tahotra ny hazavana mavo mbola haunts ny Green fanala.
Na dia izany aza, voalohany hisolo ny maty i Guy Abin Sur Gardner, Hal fa dia akaiky, nandatsaka ny firotsahany hofidiana amoron-dalana. Rehefa nanomboka ny asany Guy toy ny fanala bateria ara-bakiteny nipoaka ny tavany, na iza na iza azy tsy nahatsiaro tena. Efa, toy ny Green fanala, dia nianatra ny momba ny maty ny namana iray, ary avy eo ho any amin'ny fahavinirana sy ny mena mivadika ho hazavana distrika, atosiky herisetra.
Raha akaikin'i Gay tao an-nahatsiaro tena ho Hal naka ny piarovana Green fanala – Afrikana-Amerikana mpanao maritrano John Stewart. Raha tsy tonga i Jordana nandritra ny fotoana, dia nisolo azy toy ny tena fanala.
dia tsy azo tanisaina ny endri-tsoratra rehetra, satria izy ireo teo amin'ny tantaran'ny Sariitatra be loatra. Fa milalao ny lalao Green fanala, ianao, dia mianatra ny fototra sy ny mahery fo indrindra faran'izay malaza ao amin'ny anjara asa ity.